शौचालयमा एउटा शेल्फ स्थापना गर्नुहोस्, बाथरूम तत्काल अधिक Squ स्क्वायर मीटर लाइभ!
घर / ब्लग / शौचालयमा एउटा शेल्फ स्थापना गर्नुहोस्, बाथरूम तत्काल अधिक Squ स्क्वायर मीटर लाइभ!
2021 / 04 / 11 वर्गीकरणब्लग 1488 0
धेरै परिवारहरूमा थोरै बाथरूम क्षेत्र हुन्छ, सायद, एक वाशबासिन र कमोड सबै बाथरूम हुन्छन्। एक इन्च स्पेसको रूपमा, दुबै गतिविधि क्षेत्र सुनिश्चित गर्न, तर बाथरूम, राम्रो भण्डारण विस्तार गर्न चाहानुहुन्छ, उत्तम तरिका भनेको शौचालय माथि १ ㎡ को राम्रो उपयोग गर्नु हो।
१㎡> ㎡㎡, माथि शौचालय भण्डारण सल्लाहहरू।
क्याबिनेटहरू: ठाउँ लिने छैन, तर पनि भण्डारण आवश्यकताहरू पूरा गर्न।
विभाजनहरू: फाडेड स्पेसको अधिकतम प्रयोग गर्नुहोस्।
भर्या: दुबै भण्डारण कलाकृति र सजावटी टुक्रा।
ऐना: नेत्रहीन अंतर विस्तार गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग बाथरूममा पर्याप्त भण्डारण ठाउँ छैन भने, तपाईं शौचालय पछाडिको खाली पर्खालबाट उधार लिन सक्नुहुन्छ।
तपाईले गर्न सक्ने पहिलो कुरा भनेको भण्डारको लागि शौचालय पछाडि भित्ता क्याबिनेट स्थापना गर्नु र यसमा दैनिक आवश्यक शौचालय राख्नु हो जसले ठाउँको उपयोगमा सुधार मात्र गर्दैन, तर यसलाई दैनिक प्राप्त गर्न सजिलो बनाउँछ, उत्तम!
तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा तपाईलाई के गरिरहनु भएको छ भन्ने बारे निश्चित हुनु हो। संग्रहमा सबैभन्दा नयाँ थप संग्रहको लागि नयाँ थप हो।
तपाईले गर्न सक्ने पहिलो कुरा यो साधारण क्याबिनेट वा शेल्फ प्रयास गर्नु हो, र तैयार उत्पादनलाई अनलाइन किन्नु हो।
सायद धेरै ठूलो भण्डारण क्याबिनेट तपाईंको घरको लागि उपयुक्त छैन, तर सानो डिभाइडर राख्नु धेरै सुविधाजनक हुन्छ। यसले चीजको कुनै पनि वजन, ग्रीनरी गहना जस्ता ठूला व्यक्तिहरू, औषधीको बोतलहरू, कपास swabs र यस्तै अन्य चीजहरूको सामना गर्न सक्दछ।
यो तपाईको घर बाट धेरै प्राप्त गर्ने उत्तम तरिका पनि हो। कम्पनीको मुख्य लक्ष्य यसका ग्राहकहरुलाई उत्तम सम्भव सेवा प्रदान गर्नु हो।
शौचालय माथिका तीन पार्टिसनले ठाउँ बचत गर्दछ र एकै समयमा चीजहरू भण्डार गर्दछ, जुन व्यावहारिकताको १०० पोइन्ट हो।
भर्या .्गको भण्डारण
यदि तपाईंलाई माथिको समस्या बढी छ जस्तो लाग्छ भने, तब तपाईं शौचालय माथि सानो भर्या place राख्ने छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, भित्ता बिरूद्ध राखिएको छ, धेरै ठाउँ लिने छैन, भण्डारण तौलिए, आदि धेरै सुविधाजनक छ।
▲ तपाईं पनि यसमा भण्डारण टोकरी ह्या hang्ग गर्न सक्नुहुन्छ, उच्च बाथरूम भित्र भण्डारण र ठाउँ बचत गर्नुहोस्।
ऐना शौचालय माथि दैनिक प्रयोग समारोह, र विस्तारको प्रकार्यको अतिरिक्त राखिन्छ। दर्पणले प्रतिबिम्ब, अवरोध र कोठाको चमक बढाउन सक्दछ, अन्तरिक्षको दृश्य प्रभाव डबल गर्दै।
यसका अतिरिक्त तपाईले बाथरूमको ऐनामा पनि भित्रि भण्डारणको साथ संयोजन गर्न सक्नुहुनेछ पर्खालको सौन्दर्य सुनिश्चित गर्नका लागि वस्तुहरू भित्ता माथि राख्दा।
माथिका यी केसहरूमा हेर्नुहोस्, हामी उत्साहलाई रोक्न सक्षम भएनौं, आफ्नै बाथरूम सफा गर्न फिर्ता जान चाहन्छौं, हतारमा १ वर्ग मिटर जग्गामा शौचालय भर्ने कार्य गर्न हतार गर्नुहोस्।
अघिल्लो :: कसरी वाथरूम क्षेत्र अधिक व्यावहारिक स्थापना गर्ने? यो चार पक्षबाट सुरू गर्नुहोस्, त्यो राम्रो देखिने र राम्रो प्रयोग सुनिश्चित गर्न! अर्को: चिसो तरंग फेरि प्रहार! बाथरूम उत्पादनहरू, जाडो कसरी रोक्ने?
2021 / 06 / 08 1010
2021 / 05 / 28 1303
2021 / 04 / 22 2168
2021 / 04 / 22 1791
2021 / 04 / 21 1495
2021 / 04 / 12 1423